Tamang Samaj|Tamang|Tamang News|Portal – क्रान्तिकारी सेक्के तामाङ- खनियावास विद्रोहको अगुवा
क्रान्तिकारी सेक्के तामाङ- खनियावास विद्रोहको अगुवा
Sep 09, 2016 admin History, Local News
पश्चिम एक नं को किसान विद्रोह आफैमा एक शक्तिशाली क्रान्ति भएर निस्कियो । वि पि सरकार अपदस्त गर्ने कारणहरु मध्ये एक बन्न गयो । टक्सार, मार्पाक, खनियावास, दार्खामा भएका विद्रोहकै कारण स्थानीय तामाङहरुको आर्थिक अवस्था सुध्रिएका थिए । कम्तिमा अनुचित श्रम शोषण र चर्को व्याजबाट बचेका थिए । यी विद्रोहहरु मध्ये खनियावास विद्रोहका एक अगुवा थिए, रामबहादुर तामाङ उर्फ सेक्के ।
को हुन् त सेक्के ?
पिता जितराम र माता उर्कितका सन्तान हुन् सेक्के । वि.स. १९९० भदौ २० गते हालको सत्यदेवी गाविस वडा नं ६ मा जन्मिएका हुन् । गरिव परिवारमा जन्मिएका उनी १२ वर्षकै उमेरमा स्थानीय सामन्तहरुको घरमा ठाडे हली बसेका थिए । उनले आइती तामाङसँग बैवाहिक लगनगाठो कसेका थिए । उनका १ छोरा र १ छोरी सन्तान भए । सानैदेखि दमन, उत्पीडन र अपहेलनामा परेका सेक्केसँग साहुँ बाजेहरुसँग रिस बाहेक केही थिएन ।
चेतनाको चिराग गाउँमै गुमनाम रहेका सेक्के लाहुरेहरु मार्फत देशको परिवर्तनको खवर पाउथे । प्रजा परिषदले गरेको राणा विरोधी अभियान र शहिद बनाएको कुरा सामन्तहरु सुनाउथे । केही खुकुलो राणानीति मात्र हैन २००४ सालदेखि त श्री ५ र जनता एक भइ श्री ३ को विरुद्ध लडाइ लडेको थाहा पाउदथे । नभन्दै जनता जागे जस्तै शक्तिशाली सत्ता पनि ढाल्दो रैछ भन्ने चेतना सेक्केमा बढ्दै गयो । उनी काममा अटेरी गर्न थाल्दथे । साहुँ गाली गर्थे एक न एक बहाना गर्थे । शोषण भएको उनलाई थाहा थियो तर प्रतिकारै गर्ने आट भने उनमा थिएन । तै चेतनाको चिराग भने बलेकै थियो ।
एकदिन उनी बाधा बसेको घरमा रु ३०० हरायो । खोजी गर्यो भेटिएन । सबैलाई केरकार गर्यो भेटिएन । अन्नतः पारिवारिक वैठक बस्यो, शंका सेक्केमा गयो । एक मतोले उनी चोर बनाइए । किलामा बाधे, पिटे मरणसन्न हुनेगरी । अहँ उनी बोलेन । काधमा डोरीको सहाराले जातो झुन्ड्याइयो । खड्कुलोमा पानी राखेर सिस्नो झालेर हानियो । लगातार ३ दिन यातना दिदा पनि चोरी आरोप स्विकारेन । पछि काट्ने निधो गरी तरवार निकाल्यो । बचे केही गरौला भन्ने ठानी बच्नको लागि उनले आरोप स्विाकारे । आफुसँगै मुखियालाई पनि मुछ्यो । त्यसबेला भोग्टेनी, आर्चेत, ठुलो आर्चेत र पर गोन्बोङमा चार मुखिया थिए । सबैसँग बाँडेको भनेको आरोप गाउँभरी फैलियो । मुखियाहरु रिसले रन्किएर आए । अर्धलाश सेक्केको गाला चट्काए । सेक्केले भित्रि स्वासले भने, मुखियासाब चोर म पनि हैन तपाई नि हैन, ३ दिनसम्म मेरो यो हाल पार्दा नि कसैले हेर्न नआउदा त्यति भनेको हुँ । माफ पाउँ धन्य तपाइहरुले हेर्नु भो । यत्ति भने । तब मुखियाहरु उनको साहुँसँग रिसाए । अब मर्यो भने तपाईको जिम्मा भनेर मुखियाहरु हिडे ।
मार्नलाई तयार पारिसकेको सेक्के यातना बढी खप्नु परे पनि मुखियाहरुको आगमनले बन्धनबाट उन्मुक्ति पायो । गाउँमा कसैलाई नभन्ने सर्तमा उनी घर आए । घर आउदा खुट्टा टेक्न सक्ने अवस्था थिएन । शक्ति पनि थिएन, घिस्रिदै घिस्रिदै पुगे घर । केही दिन लास झै सुते । मुखियाहरु हेर्न आए । ए मार्न त मारेन छ । अब तग्रिंने गरी तिउन खाउ भन्ने सुझाव पाए । तर उनीसँग खुराक खाने केही थिएन । मनमा बदलाको भावना मात्रै आइरह्यो । हिडडुल गर्नसक्ने दिनको प्रतिक्षामा रहिरहे ।
सेक्केले कसैलाई सुनाएन आफ्नो कहानी । आफ्नी श्रीमती र उपचारमा संलग्न बोम्पोलाई बाहेक । यो कुराले बाहुन खुसी भए । उनीहरुको अनुमानको ठिक विपरीत । त्यसैले हप्तादिन पछि भेट्न आए । सेक्केले अब म भैसी पाल्छु, हजुरकोमा काम गर्न सक्दिन । दुध घिउ खाने रहर सुनाए । बाहुनले हुन्छ नि । अहिले पाल मल बनाउ पछि ब्याएपछि ३ महिना पछि मलाई देउ भने ।
भोलिपल्ट सेक्के बाहुनको घरमा गए । भैसी ल्याए । गोम्बोङको चौतारोमा बाँधेर गाउँले बोलाए मासु लिन । मैले बाहुनको भैसी ल्याएको छु, मासु खाउ भनेर दिएको । लौ आउ घरै पिच्छे एकजना । तर कोही निस्किएन । एक दुई जना युवा आए । तर अभिभावकले तुरुन्तै फर्काएर लगे । एक्लै कसाही बने ।
२०१२ सालमा चोर आरोपमा यातना पाएपछि सेक्के विद्रोही बने । भैसी काटेकोमा कचहरी बस्यो । पागल भएको भन्यो । बाहुनहरु आफुले दिएको यातनाको पोल खोल्ला भनी सहमत भए । उनी हातमा मट्यमंग्रा बोकेर हिड्थे । कुनै निहुँ पाउनसाथ बाहुनसँग झम्टिन्थे । टाढाबाट ढुंगा हान्ने नजिक भए चिथोर्ने गर्न थाले । उनलाई सबैले पागल भन्न थाले । कार्य पनि सोही किसिमको गर्न थाले । स्थानीय सामन्तहरु उनीसँग जोगिएर हिड्नु पथ्र्यो । तर केही आन्दोलनकारीलाई सेक्केले प्रशिक्षण दिदै थिए ।
सेक्केले पागलपन देखाउदै थिए । उनी योजनावद्ध पागल बनेका थिए । स्थानीय सामन्तहरु र उनका मतियार मुखियाहरु सेक्केसँग डराउथे । धेरैले पिटाइ खाइसके पनि मुद्धा भने हालिएको थिएन । पागलको काममा के मुद्धा भन्ने ठान्थे । यही बेला परबुबाट धान चोरी गरेको आरोप ६ जना महिलामाथि आरोप लाग्यो । प्लेन्तोङस्या (पुतली तामाङ)को नेतृत्वमा भएको भनिएको सो चोरी काण्डको आरोपीहरुलाई रुखमा बाँधी वेइज्जत गरियो । गाउँमा गरे सेक्के आउने डरले खुलुलु गङको लाकुरी चौतारीमा नै कचहरी गरियो । सेक्केले यो खबर पाउनासाथ दौडेर गइ कचहरी बिथोले । आचार्य नामको एक दमको रोगी भेटाइ उनलाई कारबाही स्वरुप कालोमोसो दलेर गाउँ घुमाए ।
सेक्केको विद्रोही अवरोधको रुप बढ्न थाल्यो । स्थानीय युवाहरु बिस्तारै सेक्केको पागलपनको वास्तविकतासँग परिचित हुन थाले । एक दुई तिन हुँदै विद्रोही मानसिकता बढ्न थाले । स्थानीय सामन्तहरुको हेपाइ र पेलाइको उत्कर्षमा पुगेको थियो । कुनै पनि परिवार शोषणबाट अछुत थिएन । त्यसैले झारा पर्म तिर्न नजान थाले । काममा नजान थाले । बाधा बसेकोहरु भाग्न थाले । हलीहरु रातारात काम नगर्ने भए । सेक्केले साथ पाउदै गए । उत्साह बढ्दै गए ।
चुनावी नारा मुक्ति र घर
२०१५ सालको आम चुनाव भयो । स्थानीय साहुमहाजनहरु बाहेकमा घरको चिन्ता थियो । खानाको चिन्ता थियो । ऋणको चिन्ता थियो । आफ्नो घरखेतको तमसुक र राजीनामा स्थानीय महाजनहरुको खल्तीमा थियो । त्यसैले उनीहरु क्रान्तिकारी नारा बोकेका कांग्रेससँग नजिक भए तर चुनाव चिह्न गोरखा परिषदको घर भएकोले ललितमानको जीत भयो । सेक्के मुक्तिको पक्षमा थिए तर जीत घरको भयो । चुनावी परिणामले स्थानीय तहमा खासै फरक पारेन । सेक्के लगायतकाहरु नियमित अभियानमै थिए । महत्वपूर्ण विद्रोहको लागि तयारी गर्दै थिए ।
सेक्केको लाहुरे भेट अभियान
सेक्केले यो बुझे की तालिमबिनाको गोदाइले सक्दैन । योजना महान रहे पनि तयारी गर्न मजबुत हुनुपर्ने ठानी छुट्टीमा आउने लाहुरे भेट गर्न थाले । प्रत्यक्ष आक्रमण गर्न नसेकेको कुरा गरे । गाउँमा आएका एक दुईजना लखाटेर अन्याय अत्याचार र शोषण बाट मुक्ति नहुने बताए । सोही क्रममा दामन पाख्रिनसँग पनि भेटेका थिए ।
वाहिरी अन्न टिप्न आह्वान
ज जसले जुन जुन खेत रोपेको हो त्यस्को कोदो टिप्न आह्वान गरे । जनताले सो बमोजिम गरे । पशु धनमा पनि विस्तारै हैकम जमाउन लागे । जस्ले पालेको हो उसैको घरमा रहने भो । त्यस्को अगुवा सेक्केले गरे । भौतिक कार्वाहीमा दामन झन कडा निस्किए । दिनहुँ कोही न कोही कारबाहीमा पर्न थाले । पक्रने गाउ घुमाउने, तर्साउने, धम्क्याउने गर्न थाले । प्रतिकार गर्नेहरुले झन कडा पिटाइ भेटे । सेक्के कस्लाई कुन किसिमको कार्वाही गर्ने भनि किटान गर्थे । सोही बमोजिम हुँदै गए ।
२००४ सालदेखिको उकुसमुकुस २०१६ मंसिरमा देखिने भयो । जाली तमसुक स्वयं नष्ट गर्न दिएको म्याद कटेपछि २०१७ असारमा घर घरमा समेत आक्रमण गर्न पुगे । त्यहाका स्थानीय रिजालहरु घर छोडी जानै पर्ने भो । एक पछि अर्को घरमा रहेको तमसुक खोजी गर्न थाल्यो । अनियन्त्रित भिडले तमसुक मात्र हैन धन सम्पत्ति पनि लान थाले ।
अन्तत्वगत्वा सेक्केलाई खनियावास काण्डको मतियारको रुपमा पक्राउ गरियो । पछि मेलमिलाप गरियो । फर्कियो तर पुनः पक्राउ गरी जेलमा राखियो । ७ वर्ष जेलमा बसि फर्कियो । त्यसपछि उनी गुमनाममा बसे ।
वाहिरी दुनियामा नेतृत्वमा आएनन् सेक्के । आफ्ना आन्दोलनकारी साथीहरु नेपाली कांग्रेस निकट राजनीतिमा लागे । कोही बेपत्ता भए कोही शहिद भए । निर्वासनमा गए , तर सेक्के आफ्नै घरवार सम्हाल्न बसे । आफु बसेको घर पनि आफ्नो नाममा थिएन । धेरै तामाङहरुले आफ्नै घरजग्गा पनि मूल्य तिरेर लिए । तर सेक्के पैसा पनि तिरेन घरबारी पनि छोडेन । बरु मुद्धा लडे । मुद्धामा सहयात्रीहरुले नसघाएको उनलाई तितो लाग्थ्यो । अन्तत मुद्धा जिते ।
गाउँ छोडेर अर्को गाउँमा
बुढेसकालमा साहारा सुविधाको खोजिमा धादिङ सदरमुकाम नजिक सांकोषमा बसाइ गर्न थाले । एउटा महत्वपुर्ण आन्दोलनका अगुवा गुमनाम विरानो भए । न कसैले खोजे न कसैले सोधे । धुमधुमती बाचिरहेको जीवन १६ वर्ष अघि दुःखत निधन भए ।
उनको निधन दुःखत थियो । योभन्दा बढी दुःख त उनका परिवार थिए, आन्दोलन गरेकै कारण कहिल्यै क्षेत्रीबाहुनको आफ्नो नभएको उनलाई पञ्चायतले पनि पेल्यो । पञ्चायतमा लागेका आफ्नै गाउलेले दिएको पीडा स्मरणीय छ ।
मुक्तिको लागि लगातार लागेर जेलमा समेत परेका सेक्केको उचित सम्मान गर्न चुकेकै हो । अहिलेको पुस्ताले उनको बारे सकारात्मक धारणा बनाउनु पर्दछ । उनको सम्मानार्थ थप खोज अध्ययन गरिनु आवश्यक छ ।
अपेक्षा- सहयोग र सद्भावको
संसदीय व्यवस्था अन्त्य तथा विपी कोइराला नेतृत्वको सरकार अपदस्त हुनाका कारणहरु मध्ये एक पश्चिम एक नं मा उब्जिएको अशान्ति पनि थियो । तर उल्लेखित काण्डबारे इतिहासमा गज्जबसँग चर्चा गरिएको पाइदैन । हाम्रा स्रोतहरु कम छन् त्यसैले स्रोतबारे खबर पाउँ भन्ने अपेक्षा नै प्रमुख हो ।
इतिहास र राजनीतिका विद्यार्थीहरुले खोजको विषय बनाउन सके प्राज्ञिक रुपमा अगाडि बढ्थे । राजनीतिक दलका नेताहरुले वीर शहिदहरुको भागवण्डा नगरी सम्मान गरिदिए, सरकारी निकायले पनि यस प्रकारका योद्धाहरुको नाममा वर्षेणी थोरै नै सही वजेट उपलब्ध गराउन पहल हुन्थ्यो । अन्य सामाजिक संघ संस्था र अभियन्ताहरुले वीर योद्धाहरुको बारे आफ्ना मुखपत्रहरुमा स्थान दिए राम्रो हुन्थ्यो । पत्रपत्रिकाका सम्पादक तथा पत्रकारहरुले थप खोजमूलक आलेखहरु खोजेर प्रकाशन गरिए ठीक हुन्थ्यो । विद्यालयमा स्थानीय विषयहरु, जीवनीहरु तथा स्मरणीय कथाहरु पढाउदा योद्धाहरु पढाउन सकिन्छ । सामाजिक विषयमा परियोजना कार्यको विषय बनाउन पनि सकिन्छ । गीत, संगीत, चलचित्र, भिडियो र वृत्तचित्रहरुमा पनि पार्न सकिन्छ । कथा, कविता, निवन्ध जस्ता साहित्यिक विषय बनाउन सकिन्छ ।
राज्य नियन्त्रित इतिहासले गरेको विभेदलाई चिर्नु पर्दछ । आफु अनुकुलको घटनालाई मात्र उल्लेख गर्नु सरासर योद्धाहरुप्रतिको अपमान हो । यस प्रति सचेत हुन र बनाउन जरुरी छ । यी अपेक्षा, सहयोग र सद्भावमा सार्थक बन्दछ ।
tweet तामाङ चलचित्र संघकाे चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न
स्वर्गीय गोपाल र अरुणाकाे सम्मानमा संगीतिक कार्यक्रम